Wararka Maanta: Sabti, Sept 25, 2021-Booliiska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay weerar ismiidaamin ah oo Alshabaab ka geystay Muqdisho
Afhayeenka ciidanka Booliska waxa uu sheegay qaraxa inuu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyay oo uu la socday naftii hallige isku qarxiyay goobta gaadiidka lagu baarayay.
Wuxuu afhayeenku sheegay inuu khasaaraha dhimashadu intaas kasii badan karo ayna jiraan 9 dhaawac ah iyo dad kale oo ay eheladoodu la carareen markii uu qaraxu dhacay.
Dadka dhintay waxaa ku jiray hooyo sidatay labo ilmood oo yaryar, kuwaas oo ku basbeelay gaari yar oo ay la socdeen. Hooyadu waxay u socotay MCH kuyaalla isgoyska Ceelgaabta.
Sidoo kale, dadka qaraxa ku geeriyooday waxaa kamid ah Hibaaq Abuukar oo ka tirsaneyd Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, sida uu xaqiijiyay afhayeenka xukuumada Soomaaliya, Macalimow.
‘Waxa loo socdo ma ahan xarun dowladdeed, ma ahan askari, waxa halkaan ku basbeelay waa hooyo sidatay labo carruur ah, oo u socotay MCHka dhabarkayga ah,” ayuu yiri afhayeenka booliiska.
Kooxda Alshabab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxan, waxayna sheegeen in ay la beegsadeen saraakiil katirsan dowladda oo ku sugnaa kantaroolka laga galo madaxtooyada Soomaaliya.
9/25/2021 5:28 AM EST